स्वास्थ्य Archives – Page2of 15 – Mukundasen Television
भारतबाट नवलपुर आउनेहरु अव १० दिन होम क्वारेन्टिनमा
वैशाख ३ , नवलपुर । देशका विभन्न जिल्लामा कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को संक्रमण बढ्दै गएपछि पूर्वि नवलपरासीमा थप सर्तकता अपनाइएको छ ।कार्यालयले छिमेकी मुलुक भारतबाट आउनेहरुको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर ज्वरो मापन गर्ने पहिलो चरणको कामलाई कडाईका साथ लागु गरेको छ । त्रिवेणी नाका हुँदै जिल्ला भित्रने नेपाली तथा भारतीय नागरिकहरुको बोर्डरमै ज्वरो मापन गर्ने गरिएको कार्यालयका प्रमुख केशव चापागाँईले जानकारी दिए । भारतबाट आउने नेपालीहरुलाई अनिवार्य रुपमा...
विहिबार ५३४ संक्रमित थपिए, ५ जनाको मृत्यु
नवलपुर, २ चैत्र । विहिबार मुलुकमा ५३४ जना कोरोनाभाइरस संक्रमित थपिएका छन् । ४,१५२ परीक्षण गर्दा ती संक्रमित भेटिएका हुन् । १५७ जना निको भएका छन् भने ५ जनाको मृत्यु भएको छ । कूल संक्रमित संख्या २ लाख ८२ हजार ५४ पुगेको छ । कूल मृत्यु संख्या ३,०६६ पुगेको छ । यस्तै २४ घण्टामा एक सय ५७ जना निको भएसँगै सङ्क्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या दुई लाख ७४ हजार ६ सय चार...
बैशाख ६ र ७ गते देशैभर भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाईदै
नवलपुर , ३ बैशाख । बैशाख ६ र ७ गते देशैभर भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाईदैछ । ६ देखि ५९ महिना सम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ’ए’ क्याप्सुल तथा १२ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम तय भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो । बालबालिकालाई भिटामिन ’ए’ तथा जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रममा विशेष सावधानी अपनाउन सरकारले आग्रह समेत गरेको छ । भिटामिन तथा जुकाको औषधि खुवाउने स्थानमा अर्थात वितरण केन्द्रमा...
शरीरको तौल कम गर्न लसुनको प्रयोग कसरी गर्ने ।
लसुन नेपालीहरुको भान्सामा सजिलै पाईन्छ । लसुन धेरै पौष्टिक तत्वबाट भरिपूर्ण हुन्छ । भिटामिन सी, बी ६, फाइबर, म्यागनीज, क्याल्सियम आदि तत्व लसुनको सेवनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले लसुनलाई पावर हाउस भनिन्छ । लसुनको सेवनले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ । लसुन मुटुको स्वास्थ्यलाई ठिक राख्न पनि लाभदायक मानिन्छ । अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण मानिसहरुमा अहिले मोटोपनको समस्या बढ्दै गएको छ । लसुनको प्रयोगबाट तौल कम गर्न मद्दत पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको...
कोरोना संक्रमित ६ सय नाघे । सक्रिय सक्रमित ४ हजार माथि
नवलपुर, १ बैशाख । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा ६ सय ३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । ४२८९ पिसिआर र ४५१ एन्टिजोन परीक्षणमा ६ सय भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनु भयो । गौतमका अनुसार पछिल्लो सोमबारदेखि आजसम्म १३ हजार ५३ जनामा कोरोना परीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये १ हजार ५ सय ३६ जना संक्रमित भएका छन् भने ४ सय २० जना संक्रमणमुक्त...
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण ः दैनिक ११ हजार संक्रमित हुन सक्छन्
काठमाडौं, ३१ चैत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण दैनिक ११ हजार जना संक्रमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामि जेठ–असारमा उच्च विन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । जेठ अन्तिम साता र असार पहिलो सातामा दैनिक ११ हजार जना संक्रमित हुने र सक्रिय संक्रमितको संख्या ६ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी दिनु भयो । ‘त्यसका लागि आवश्यक तयारी पनि गरिएको छ । अहिले युवा...
गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट दुईको मृत्यु
पोखरा, २९ चैत। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमणबाट दुईको मृत्यु भएको छ । तनहुँ र कास्कीका एक÷एक पुरुषको कोरोना सङ्क्रमणबाट आज मृत्यु भएको हो । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका ५१ वर्षीय पुरुषको चरक मेमोरियल अस्पतालमा मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशक डा विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो । ती पुरुषमा यही चैत २३ गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका ७८ वर्षीय पुरुषको पनि चरक मेमोरियल अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । उहाँमा चैत...
काठमाडौं, ३० चैत्र । कोरोना भाइरस कोभिड—१९ विरुद्धको भेरोसेल खोप मंगलबार देखि ४० देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लगाईने भएको छ । भोलिदेखि ०७८ वैशाख ५ सम्म खोप सो उमेर समूहका नागरिकलाई खोप दिइने स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तरगतको खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले जानकारी दिनु भयो । चैत २५ बाट १८ देखि ५९ बर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप लगाउन सुरु गरिएको थियो । १८ देखि ५९...
नेपालमा आज एकैदिन १३ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, ५५९ संक्रमित थपिए
३० चैत्र । नेपालमा आज एकैदिन १३ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, ५५९ संक्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा चार सय ९६ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या दुई लाख ८० हजार पाँच सय २४ पुगेको छ । ४३ सय ७८ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा चार सय ९६ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । यस्तै सात सय २७ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा...
चैत ३० , काठमाडौँ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार आइतबार ३ सय ३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकामा १८ वर्षभन्दा मुनिका १८ जना छन् । त्यस्तै, शनिबार थपिएका ३ सय ३७ जना संक्रमितमा २७ जना बालबालिका थिए । निर्देशक डा. पौडेलले दुई सातायता बालबालिकामा संक्रमण बढेको बताए । ‘यो राम्रो संकेत होइन । यसलाई रोक्न अभिभावक र शिक्षक सबैले बालबालिकालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउनुपर्छ ।’...